Tsy tokony hailika ireo marary | NewsMada
Tsy tokony hailika ireo marary
Areti-mifindra ny raboka. Izay no mahatonga ny fanilikilihana ireo marary eny anivon’ny fiarahamonina. Voizina ao anatin’ny Andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ity aretina ity anefa ny ady amin’izany fanilikilihana izany. Anisan’ny sakana tsy hanatonan’ny marary dokotera koa ny henatra.
Manodidina ny 15 taona ka hatramin’ny 50 taona ny olona voan’io aretina io. Mahatratra 30.000 ireo marary eto Madagasikara izay manaraka fitsaboana eny amin’ny tobim-pahasalamana. Maimaimpoana ny fitiliana sy ny fandraisana an-tanana ireo marary eto Madagasikara. Toraka izany ny fanafody, indrindra ho an’ireo fianakaviana marefo sy ny ankizy tsy ampy sakafo tonga eny amin’ny foibe fitiliana ny aretina raboka (CDT).
Manentana ny rehetra ny fandaharanasan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana (OMS) hiara-hamongotra ny aretina raboka. Mitaky ny finiavan’ny olom-pirenena rehatra, ny mpiasan’ny fahasalamana sy ireo fiarahamonim-pirenena izany rehetra izany. Eo koa ireo mpanohana ara-bola sy ara-teknika ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka hanambatra hery amin’ny ady amin’ny aretina raboka.